Factory Factory | Mpanamboatra sy mpamatsy vokatra ambongadiny - Fizarana 3
Antsoy izahay: 0086-571-87388030 Antsoy izahay: 0086 18100183575
Ampinga tsy fitsaboana
Respirator fanadiovan-drivotra voafehy
Syringes azo ampiasaina
Fitaovana fitsaboana ara-pahasalamana ao an-trano
Kitapo famonoana otrikaretina UV
Vata fampangatsiahana / frizera
Fiara famindrana tsindry ratsy
Tube momba ny viriosy
Takelaka misy otrikaretina
Saron-tava miendrika 3 Ply tsy voatenona D ...
Mpanamboatra kalitao avo ...
Tongee asa tanana ...
Môtô modely solomaso moto ...
Tongee fiarovana vokatra vaovao ...
Tongee Emergency medical su ...
Tongee propesie fanamboarana ny vehivavy azo havaozina LED saron-tava tarehy saron-tarehy saron-tarehy tarehy
Tongee haingana fandefasana landihazo miaro tarehy miaro tarehy miaraka amin'ny valizy
Ppe Fiarovana amin'ny saron-tava fiarovana amin'ny tarehy plastika Uv
Surgeon elastika malefaka amin'ny ankapobeny loha azo ampiasaina pp + pe Cap fandidiana
Ny saron-doha medikaly manga dia vita amin'ny pe + pe, ary misy tady azo ovaina ao ambadiky ny vokatra, izay azo ahitsy arakaraka ny endrika olona. Ny vokatra dia mifoka rivotra sy mahazo aina, mety ampiasaina amin'ny hopitaly, tobim-pitsaboana sy toerana hafa
Satroka fandidiana fanary antistatic cleanroom cap azo ampiasaina maimaim-poana
Ity satroka fandidiana fotsy fotsy ity dia vita amin'ny akora polyester, izay mahazaka rano tsara ary afaka miaro ny lohan'ny dokotera. Ny fehikibo vita amin'ny elastika dia mety mifanaraka tsara amin'ny refin'ny lohan'ny karazan'olona rehetra. Mety amin'ny hopitaly sy tobim-pitsaboana izy io. , Tobim-pahasalamana sns.
Fivarotana mivantana fivarotana tsy misy tenona manga kapila fanary sivily
Satroka azo namboarina vita amin'ny lamba tsy tenona, azo tsofina sy azo antoka, miaraka amina endrika tsy azo ovaina, azo atao ho an'ny volon'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny vovoka dia mora vovoka ary mifoka rivotra, ary azo ampiharina amin'ny sehatra maro, toy ny ozinina sy atrikasa, Trano fivarotana, fitsangatsanganana sns.
Fanary PP + PE lamba tsy tenona vita amin'ny kiraro manga fonony kiraro tsy slip
Ny vokatra dia PP + PE, ary ny famolavolana lamba fotsy matevina sy kasety manga dia mitazona ny tombon-tsoa azo avy amin'ny tantera-drano, mahatohitra ary vovoka, fa mitazona ny hatsarany ihany koa. Fampiasana indray mandeha, mety sy ara-pahasalamana, mety amin'ny hopitaly, tobim-pitsaboana, laboratoara ary toerana hafa
Disposable PP / PP + PE tsy tenona lamba kiraro fotsy fonony tsy slip slip kiraro
Ny firakotra dia manana endrika tsy mitovy, izay misy fiatraikany anti-skid tsara amin'ny fikororohana amin'ny tany. Manana lamba malefaka ny lamba, tsy mora vaky rehefa sintonina, ary tsy manimba ny tany. Tsy mafy ny feo rehefa mandeha, dia atoro anao hividy azy io rehefa mitsidika atrikasa.
Sivily fanary ambony kalitao pp + pe mandrakotra kiraro fanoherana tsy mitete
Ity vokatra ity dia fonosana kiraro voasarona. Ny fitaovan'ny vokatra dia ny PP + PE, izay afaka misoroka tsara ny fikororohana, ny fanoherana, ny fampiasana indray mandeha, ny fahadiovana sy ny fahadiovana ary loko isan-karazany no azo fidina. Azo ampiasaina amin'ny trano, hopitaly, tobim-pitsaboana ary laboratoara izy io. Toerana hafa
Fihetsiketsehana satroka mangarahara miaro tarehy tontonana tarehy ampinga
Ny lambam-baravaranay dia vita amin'ny akora mitambatra avo lenta. Izy io dia manana ny asan'ny tsy fahasimbana na ny havizanana, ny saron-doha malefaka ary ny fonosana miaro amin'ny fibre acetate manohitra ny zavona. Mety amin'ny hopitaly, klinika, laboratoara ary toerana hafa
Factory Direct varotra tarehy tarehy Shield
Ny ampinga avo lenta manga azo esorina, spaonjy mahasoa ary fehikibo vita amin'ny elatra dia azon'ny olona manana habe amin'ny loha isan-karazany. Fitaovana anti-zavona famaritana avo lenta, fahitana mazava sy malalaka, mety amin'ny ozinina, atrikasa, trano fitehirizana ary toerana hafa
Mpanamboatra akanjo fitokana-monina fandidiana lava lava azo ampiasaina
Ny vokatray dia matanjaka sy mateza, afaka miatrika asa mafy nefa mbola mitazona aina sy mahazaka aina tsara. Izy ireo dia vita amin'ny fitaovana multilayer maivana mba hahazoana antoka ny fanoherana ny tsiranoka. Natao hifanaraka amin'ny lehilahy sy vehivavy amin'ny endriny rehetra, cuffs elastika ary fehin-kibo dia natao hanomezana fampiononana sy fahaleovan-tena miaraka.
<< <Teo aloha 123456 Manaraka> >> Pejy 3/6
302, rihana faha-3, tranobe 6, No. 688 Bin'an Road, Distrikan'i Binjiang, Hangzhou